‘फेरि लकडाउनको स्थिति आउन नदिन हामी आफैं सचेत बनौं’ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
बिहिबार, वैशाख २, २०७८Thu, Apr 15, 2021
‘फेरि लकडाउनको स्थिति आउन नदिन हामी आफैं सचेत बनौं’
कमला गुरुङ सोमबार, चैत १६, २०७७, ०७:३०:००
काठमाडौं – नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर र संख्या विस्तारै उकालो लाग्दैछ। तर मानिसहरु अझै पनि निस्फिक्री भएर हिड्न छाडेका छैनन्।
मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम गर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कोरोनाबाट बचाउने मूल मन्त्र हो, तर यसलाई आत्मसात गर्ने कमै भेटिन्छन्। पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको संक्रमण दर दैनिक बढ्दो छ। यसले पनि नेपालमा कोरोनाको जोखिम झनै बढाएको छ।
भारतमा संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि भारतका विभिन्न प्रान्त तथा केही सहरहरुमा लकडाउन तथा रात्रीकालीन कफ्र्यु लगाउन थालिएको छ। तर ती प्रान्तमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्किदा उनीहरुसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण प्रवेश गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
सरकारले आवश्यक सतर्कता र तयारी नबढाए लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने विज्ञहरुले बताउन थालेका छन्। भाइरोलोजिस्ट डा लुना भट्ट सबैले जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरु पालना नगर्दा जोखिम बढेको गएको बताउँछिन्।
भन्छिन्, ‘मानिसहरुले अहिले कुनै सतर्कता अपनाएको देखिदैन। सबै जना सामान्य दिनचर्यामा फर्किसकेका छन्। यसले जोखिम झनै बढाएको छ।’
सबैले सावधानी अपनाएर सचेत भए मात्र लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आउनबाट रोक्न सकिने उनी बताउँछिन्।
'सबैले लकडाउन नगरोस् मात्र भन्छन्। तर लकडाउनको अवस्था आउन नदिन त अहिलेदेखि सबैले सावधानी अपनाउनु पर्‍यो,' उनले भनिन्।
भारत लगायत अन्य राष्ट्रमा संक्रमण दर बढ्दै गएकाले नेपालमा पनि पुनः महामारीको अवस्था नआउला भन्न नसकिने उनी बताउँछिन्। उनका अनुसार अन्य राष्ट्रको अवस्था देखेर सतर्कता र तयारी अघि बढाउनु नै बुद्दिमानी हुन्छ।
उनले भनिन्, ‘अहिलेको अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने नेपालमा पनि भारतको जस्तो अवस्था नहोला भन्न सकिन्न। अरुको देखेर आफूले सतर्कता अपनाउनु बुद्दिमानी हुन्छ।’
कोरोना संक्रमणपछि आफूखुशी घरमै जथाभावी रुपमा बेसार पानी खाने, गुर्जो खाने लगायतको व्यवहार नगर्न पनि उनको सुझाव छ। सबै जना सावधान भई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके अझै पनि महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उनले बताइन्।
‘हात धुने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। भीडभाड गर्ने काम भएन। यी सबै मापदण्डलाई अपनाउने हो भने अझै पनि महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। लकडाउन गर्ने अवस्थालाई रोक्न पनि सकिन्छ।’ उनले भनिन्।
सरकारले सबैलाई सचेत गराउन अझै पनि आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ। व्यक्ति आफैँले मनन् नगरेसम्म सरकारले जति गरेपनि प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाई छ।
यसो भन्दै सरकारले भूमिका महत्वपूर्ण छैन भन्न खोजिएको हैन। महामारी नियन्त्रणमा सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका छ। यद्यपि व्यक्ति आफैँले सावधानी अपनाउँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सके लकडाउनको स्थिति सिर्जना नहुने उनले बताइन्।
बालबालिका र युवामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै (कुन अस्पतालमा के छ अवस्था)
बढ्दै सिकिस्त कोरोना संक्रमित, भरिँदै अस्पतालका आइसियु (कुन अस्पतालमा कति)
२३ वर्षीया छिमी शेर्पाले पाइन् नयाँ जीवन, जसको पेटबाट निकालियो ३३ किलो ट्युमर [भिडियो]
बालबालिका र युवामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै (कुन अस्पतालमा के छ अवस्था) अस्पतालमा भर्ना हुनेहरुको संख्या पनि युवा उमेरका व्यक्तिहरु कम हुने गर्थे। तर अहिले अस्पतालमा हुनेहरुमा युवा उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या पनि विस्तारै बढ्दैछ। १७ घण्टा पहिले
बढ्दै सिकिस्त कोरोना संक्रमित, भरिँदै अस्पतालका आइसियु (कुन अस्पतालमा कति) देशभर हाल ८९ जना संक्रमित आइसियु र १५ जना भेन्टिलेटरमा छन्। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा छन्। यहाँ मात्र ५२ जना आइसियु र १४ जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। सोमबार, चैत ३०, २०७७
फेरि बढ्यो कोरोना संक्रमण, विज्ञ भन्छन्– निगरानी र तयारी तीव्र पारौं संक्रमितको संख्या दैनिक उकालो लागिरहँदा पिसिआर परीक्षणको दायरा भने बढ्न सकेको छैन। हाल पनि ३/४ हजारको हाराहारीमा मात्र पिसिआर परीक्षण हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। शनिबार, चैत २८, २०७७
पछिल्लो २४ घण्टामा ६०३ संक्रमित थपिए, काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २५४ जना ७ घण्टा पहिले
वीर अस्पतालको आगो नियन्त्रणमा ८ घण्टा पहिले
वीर अस्पतालमा आगलागी, नियन्त्रणमा लिने प्रयास जारी ९ घण्टा पहिले
भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा कुल परीक्षणमध्ये ६१ प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण १० घण्टा पहिले
स्वस्थ रहन असल खानपानका २० उपाय ११ घण्टा पहिले
कोरोना नियन्त्रणका लागि थप दुई जनासम्म स्वास्थ्यकर्मी खटाउन पाउने १२ घण्टा पहिले
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आइसक्यो: डा गौतम (भिडियोवार्ता) १३ घण्टा पहिले
सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा छैन: प्रधानमन्त्री ओली १५ घण्टा पहिले
भारतमा दुई लाखको हाराहारीमा थपिए कोरोना संक्रमित १६ घण्टा पहिले
बालबालिका र युवामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै (कुन अस्पतालमा के छ अवस्था) १७ घण्टा पहिले
उपचारमा चित्त बुझेन? ११३३ मा फोन गर्नुहोस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय बिहिबार, चैत २६, २०७७
प्यथोलोजी एसोसिएसनमा डा झाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति आईतबार, चैत २९, २०७७
नेपाल सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजीमा नयाँ कार्यसमिति शनिबार, चैत २८, २०७७
प्रतिष्ठानमा डिन र अस्पतालमा निर्देशक हुने गरी छाता ऐन आउनु राम्रो हो : प्राडा बुद्धिबहादुर थापा [अन्तर्वार्ता] रिता लम्साल
नेपालले ल्याबमा एमआरए मान्यता पायो– सरकार, डाक्टर र बिरामीलाई के फाइदा? डा केयुर गौतमसँग भिडियो वार्ता रिता लम्साल